Maitiro ekuwedzera mimhanzi isiri muApple Music | IPhone nhau
Maitiro ekuwedzera mimhanzi isiri muApple Music
Apple Music ine rakakura rakakura katarogu kuitira kuti zvizhinji zveizvo isu zvatiri kutsvaga muApple nyowani yekushambadzira sevhisi zvioneke, asi iwe unogona kugara uchigadzira imwe dambarefu kana muimbi akasiiwa kunze nekuda kwekusasvirana chibvumirano neApple. Mhosva dzinonyanya kuzivikanwa ndedzeya maBeatles kana Prince, asi kune mamwe akawanda. Kana iwe ukasuwa dambarefu kana muimbi muApple Music katalog, usanetseke, sezvo nekuda kwekubatanidzwa neTunes Match unogona nyore nyore kuwedzera aya mazita kuMumhanzi wako uye unakirwe navo kubva kune chero chako chishandiso sekunge chiri mukati meApple Music. Tinotsanangura kuti sei.
Mumuenzaniso isu tiri kuzoshandisa imwe yeanonyatso kuzivikanwa maBeatles muunganidzwa maalbhamu, "1", iyo isingaoneke muApple Music. Sezvakaita chero dambarefu ratiri kuda kuwedzera kuTunes, isu tinongofanirwa kudaro dhonza folda yacho kuwindo reTunes uye zvinobva zvango wedzerwa. Isu tatova neayo albham muTunes asi haisi muCloud kuti tikwanise kuishandisa kubva kune chero chishandiso.
Kana iwe ukatarisa pane yega rwiyo rwiyo, gore rakatsetseka rinowanikwa kurudyi, zvinoreva kuti harisi muCloud, chete pakombuta yedu. Zvatichaita ndezvekuti Apple inozvizivisa uye inotsvaga kuenderana kwayo nemumhanzi wainayo muTunes catalog yayo (pane maBeatles). Iri ndiro danho rakanyanya kusimba, kubvira inoda kuti mimhanzi inyorwe zvakanaka kuitira kuti zvizivikanwe nealbum yauinayo kwete neimwe. Kana isina kunyorwa, chakanakisa kuenda kualbum art uye sarudza sarudzo "Get information" nekupinda pamurume zita, gore, muimbi, zvichingodaro.
Isu tatova nealbum yedu yakanyorwa nemazvo uye ikozvino izvo zvatinofanirwa kuita kuwedzera kune iyo iCloud. Kurudyi tinya zvekare pane iyo album butiro uye tinosarudza sarudzo «Wedzera kuICloud music library». Mushure memaminetsi mashoma kana masekondi iyo albhu ichave yatove mune yako iCloud raibhurari, uye nekudaro pane ako ese zvishandiso neApple Music.
Kunyange unogona kubvisa kurodha pasi kubva pakombuta yako uye ita kuti inzwike nekutenderera. Cherekedza kuti raibhurari yangu yemumhanzi pakombuta yangu yese iri muICloud, kwete pakombuta, inozivikanwa negore diki rinoonekwa mukona yezasi yekurudyi. Iwe unogona kuita zvakafanana pane yako iPhone kana iPad, zvinoenderana nekuti iwe unoda kuiteerera kunze kwenyika kana kuburikidza neinternet kubatana. VaBeatles vatove pane yangu Apple Music nekutenda kune aya matanho akareruka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Maitiro ekuwedzera mimhanzi isiri muApple Music
Hei, nei ndichirega kuwana "kuwedzera ku ICloud library"
Iwe unofanirwa kuve neyazvino vhezheni yeTunes uye Apple Music yakamisikidzwa
Hi Luis, mune yangu, sarudzo "wedzera kuICloud raibhurari" haioneke kana, kana ndine apple mumhanzi mukati memwedzi mitatu-yekuyedza nguva, asi handina chibvumirano iTunes Match (€ 3 / gore), ndinofunga ndizvo dambudziko redu ...
Iyo haifanire kunge iri dambudziko, nekuti ini handina kuitenga.
Ehe, ndinokutendai zvikuru neruzivo, kune avo vasingaone sarudzo, nekuda kwechimwe chikonzero kana iwe watove nealbum paTunes, unofanirwa kuidzima wobva wawedzera zvekare, saka sarudzo yatove kutooneka
Ini ndinonyora dhata dzenziyo asi pandinosarudza sarudzo yekuwedzera kune raibhurari yemimhanzi yeICloud, hapana chinoitika, iro gore richiri kuoneka nemitsetse yakaputsika. Chii chandingaite? Ndatenda.
Ini ndinowana zvese kunze kwekuti handikwanise kuteerera mimhanzi kubva ku iphone yangu, ndine ma discs mu icloud asi handisi kuaona kubva ku iphone yangu. mune yangu bhendi iri Chishandiso
Ndine windows 10 PC uye nekuisa iyo itunes, ndine ipad 4
pandinowedzera mimhanzi kuibraibhurari yangu icloud kubva pc yangu inotakura nenzira kwayo, inoridza pasina matambudziko muitunes yepc yangu, asi pane ipad mimhanzi inoonekwa ine mabutiro nezvose asi hapana chinonzwikwa, haitambe kana iri grey, hazvinzwiki.
Ndakaedza sarudzo dzakawanda asi ndisiri kuwana mhedzisiro, vanotondiudza kuti kumhan'ara izvi ndinowana mari hahaha ndinopokana nazvo mushure mekuverenga zvese zvichemo izvi, kana ndikawedzera mumhanzi kuraibhurari yangu ye iclouds kubva paPC yangu nekuti imo maalbum kana nziyo dzisiri muTunes, sekuziva kwangu handizvo zvipingamupinyi sezvo ini ndaona kuti kubva mackbook pro vanoita maitiro akafanana neni uye vanoita basa ravo.
pamwe kukanganisa uku ndekwe windows chete ini ndichaonga kana mumwe munhu achigona kundibatsira.
Carlos Rodriguez akadaro
Uye unoziva here kuti ingani nziyo dzandinogona kuwedzera kuraibhurari yemimhanzi yeICloud?
Pindura Carlos Rodriguez
Parizvino 25.000 inova 100.000 munguva pfupi
zvakanaka, ndine iTunes yakagadziridzwa uye ini ndinowedzera yangu dj playlists kufaira kana »rondedzero» nziyo nevagadziri vasingazivikanwe vasingaonekwe muTunes, ini ndinowana gore iro asi kwete sarudzo kuti ndikwanise kurikanda kuICloud uye ini Ndiri kushupika nekuti ini ndoda kuendesa nziyo kuIpad senge yehupenyu, chero mhinduro?
Mushandisi akaora mwoyo akadaro
Inoshanda nenziyo dzisiri paTunes here? Ndine nziyo dzisinganzwisisike dzandaifanira kurodha pasi kubva pa internet. Asi pandinovhura mimhanzi yeapuro, haingopfuuri kune yangu mamwe majaira. Mune mamwe mazwi, ivo havaoneke pane yangu iPhone kunyangwe ndine ivo muraibhurari yangu iTunes. Izvo zvinoodza moyo.
Pindura kune Akarasika Mushandisi
Mhoro. Kuendesa raibhurari yako iTunes kune yako iPhone, iwe unofanirwa kutanga wamisa iCloud raibhurari pane iyo iPhone, enzanisa mimhanzi sezvayakanga iri pamberi peApple Music, dzosera raibhurari yeICloud, uye sarudza "Unganidza" paunoita. Bvunza zvekuita ita nezvawange uine pane yako iPhone.
Cydia simaki inovandudzwa kuti ishandure 1.1.20 kugadzirisa zvisingatarisirwi kudzima nyaya
Maitiro ekugadzira Nyaya muGoogle Mifananidzo app